Rariny sa tsia ny tolona 2009?
Tadidin'ny Malagasy ny fandrarana kandidà maromaro, ka anisan'izany ny filohan'ny Tetezamita Andry Rajoelina, ny filoha teo alohany Marc Ravalomanana, ny teo alohan'io Didier Ratsiraka ary dimy hafa toa an-dry Rakotomalala Fleury sy olona efatra hafa ihany koa.
Ny anton'io dia ny hoe mba hisian'ny fitoniana eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Nanaiky tsy sazoka ny rehetra. Nangidy tamin'ny Malagasy anefa ilay fanapahan-kevitra, satria izy izay tokony nitsara azy mirahalahy mianaka indray no nampandeferina.